Nokia 9 Pureview na -enweta mmelite Eprel na akụkọ | Androidsis
Nokia bu ulo oru ọhụrụ software update maka Nokia 9 Dị Ọcha ya na otutu akwukwo ohuru. Versiondị "v4.22c" dabere na A gam akporo 9 achịcha -eweta kwa April nche kwachie.
Dabere na ndị ọrụ mgbanwe gọọmentị, mmelite ọhụrụ a chọrọ iji melite nkwụsi ike sistemụ, nye mmelite njikwa onye ọrụ, ma melite nchekwa. Ihe ndi ozo banyere nke a n’okpuru.
Mmelite ahụ nwere nha 250,4 MB, nke na-eduga na mmụba na nsụgharị ngwa ngwa. Ndị ọrụ na-akọ ụfọdụ njikarịcha ndị ọzọ na-eweta mmelite ọsọ maka ngwa igwefoto yana ọsọ ọsọ na uche dị ukwuu na ihe mmetụta mkpịsị aka na-ngosi.
Nwelite ohuru maka Nokia 9 Pureview
Face Kpọghe na-kachasị na now unlocks na ngwaọrụ ngwa ngwa. Agbanyeghị, mgbanwe ndị ọzọ gụnyere ụda anụ ahụ ka mma, agba ihuenyo ziri ezi karịa, yana nhazi nhazi onyonyo ka mma, ka ị na-eji ngwa igwefoto na-ese foto.
Mmelite a na - apụ maka Nokia 9 Pureview n’ụwa niile, gụnyere España. Anyị na-atụ aro ka ị na-ana ngwaọrụ gị dịkarịa ala 60% maka a ezigbo update na jikọọ na a mụ na ngwa ngwa Wi-Fi network ịzọpụta ọzọ akwụ ụgwọ.
Dịka nyocha, ọ bara uru ịkọ na Nokia 9 Pureview mara maka modulu igwefoto penta ya na ihe ntanetị anya 12 MP Zeiss nwere oghere f / 1.8. Ekwentị na-ese foto site na ese foto ise niile wee wepụta otu onyonyo zuru oke. Igwefoto dị iche iche na-enyere ngwaọrụ aka ijidekwu ọkụ ma nweta foto abalị ka mma.
Mmetụta mmelite Nokia 9:
Reader Onye na -agụ mkpịsị aka
Cal Nhazi ihuenyo ezughị oke
JPG dị n'elu
Colors Agba akpụkpọ ahụ dị iche
Photos Foto ndị na -adịghị mma
Ihe ngosi HDR
App Ngwa igwefoto mebiri (ahụbeghị nke ọ bụla kemgbe mmelite)
Ka dịkwa njọ:
Speed ​​Ọsọ nhazi foto
N'ikpeazụ, ka anyị cheta nke ahụ ọnụ na-arụ ọrụ na Snapdragon 845. Ihe ngosi QHD + P-OLED nke 5.9-anụ ọhịa na-anọdụ ala n'ihu ma echekwa ya Gorilla Glass 5. Iji kwado ụbọchị zuru ezu nke iji ekwentị, Nokia gbakwunyere batrị 3,320 mAh na nkwado maka ngwa ngwa 18 W.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 9 Pureview na-enweta mmelite Eprel na nchekwa nchekwa na mmelite dị iche iche
Leaked Snapdragon 735 Spec: Ga-eweta Nkwado maka Netwọk 5G na Mid-Range